Miyaan is diiwaan-gelin karaa bilaa aqoonsiga elaktarooniga ah?
Miyay tahay in aanad isticmaali karin adeegayaga intarnatka laakiin aad naga diiwaan-gashanayd xilli ka mid ah labadii sanno ee ugu dambeeyay? Markaas waxaad wici kartaa xarunta telafoonkayaga isla maalinta kuugu horeysa ee aad tahay bilaa shaqo si aad isu diiwaan-geliso sidii shaqo-raadiye ahaan mar kale. Anaga ayaa markaasi wargelinayna qasnadaada shaqo la’aanta inaad tahay bilaa shaqo si aad u codsato gunnada lacagta.
Suurtagalnimada is diiwaan-gelinta dhanka telafoonka waxay ansax tahay si ku meel-gaar ah si loo yareeyo faafinta cudurka ee faayraska koroona.
Miyaan is qori karaa ka hor maalinta ugu horeysa ee aan ahay shaqo la’aan?
Haa, adigiu waad is qori kartaa ka hor intaanad noqon bilaa shaqo, laakiin ta ugu fiican waa inaad sugto ilaa iyo maalinta ugu horeysa ee aad tahay bilaa shaqo.
Haddii aad iska qortid dhanka boggayaga intarnatka una baahato inaad wargeliso qasnadda shaqo la’aanta xilli ah taariikh dambe markaas waad na soo wici kartaa ama nagala sheekaysan kartaa qoraalka kombiyuutarka marka la gaaro taariikhda aad doonaysid inaad samayso diwaan-gelintan. Haddii aad is qortay adigoo shakhsiyan u soo booqday xafiis waxaad wacaysaa xaruntayada telafoonka si aad u samayso is diiwaan-gelinta dhanka telafoonka.